सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर र प्रभु येशू उही परमेश्‍वरका देहधारणहरू हुनुहुन्छ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “परमेश्‍वरको बारेमा तेरो बुझाइ के छ?” बाट उद्धृत गरिएको
येशू र म एउटै आत्माबाट आएका हौं। हाम्रा देहहरूमा हामी सम्‍बन्धित नभए पनि, हाम्रा आत्माहरू एउटै छन्; हामीले गर्ने कामको विषयवस्तु र हामीले लिने काम उही नभए तापनि, सारमा हामी उस्तै छौं; हाम्रा देहहरूले फरक-फरक रूपहरू लिन सक्छ, तर त्यो कुरा युगको परिवर्तन र हाम्रो कामको फरक आवश्यकताहरूको कारणले गर्दा हो; हाम्रा सेवकाइहरू उस्तै छैनन्, त्यसकारण हामीले अघि सार्ने काम र मानिसलाई हामीले प्रकट गर्ने स्वभावहरू पनि फरक छन्। यही कारणले यो दिनमा मानिसले जे देख्छ र बुझ्छ त्यो विगतको जस्तो छैन, जसको कारण युगको परिवर्तन नै हो। उहाँहरू लिङ्गमा र उहाँहरूको देहहरूको रूपमा फरक हुनुहुन्छ, र उहाँहरू एउटै परिवारमा जन्‍मनुभएको थिएन, उही समय अवधिमा जन्‍मने कुरा त परै जाओस्, तैपनि उहाँहरूका आत्मा एउटै हो। उहाँहरूका देहमा न त रगतको नाता छ न त कुनै पनि प्रकारको शारीरिक साइनो नै छ, तैपनि उहाँहरू दुई फरक समय अवधिहरूका परमेश्‍वरका देहधारी शरीरहरू हुनुहुन्छ भन्‍ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। उहाँहरू एउटै रगत-वंशीह नभए पनि र उहाँहरूले एउटै मानव भाषा नबोल्‍नुभए तापनि (एक जना पुरुष हुनुहुन्थ्यो जसले यहूदीहरूको भाषा बोल्‍नुहुन्थ्यो र अर्का महिला हुनुहुन्छ जसले चिनियाँ मात्रै बोल्‍नुहुन्छ) उहाँहरू परमेश्‍वरका देहधारी शरीरहरू हुनुहुन्छ भन्‍ने कुरा अखण्डनीय सत्यता हो। यी नै कारणहरूले गर्दा आफूले गर्नुपर्ने काम गर्नको लागि उहाँहरू फरक-फरक देशमा, र फरक-फरक समय अवधिमा जिउनु पनि भयो। उहाँहरू एउटै आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा एउटै सार छ भन्‍ने तथ्यको बाबजुद पनि, उहाँहरूको देहहरूको बाहिरी भेसहरूका बीचमा कुनै ठोस समानताहरू छैनन्। उहाँहरू दुवै उही मानवतामा हुनुहुन्छ, तर जहाँ सम्म उहाँहरूको देहहरूको बाहिरी रूप र उहाँहरूको जन्‍मको परिस्‍थितिहरूको सवाल छ, उहाँहरू उही हुनुहुन्‍न। उहाँहरूको सम्‍बन्धित काममा वा उहाँहरू बारेको मानिसको ज्ञानमा यी कुराहरूले कुनै प्रभाव पार्दैनन्, किनभने, अन्तिम विश्‍लेषणमा, उहाँहरू एउटै आत्मा हुनुहुन्छ र कसैले पनि उहाँहरूलाई अलग गर्न सक्दैनन्। रगतद्वारा उहाँहरू सम्‍बन्धित नभए तापनि, उहाँहरूको सम्पूर्ण अस्तित्व उहाँहरूको आत्माहरूको नियन्त्रणमा छन्, जसले उहाँहरूलाई फरक समय अवधिमा फरक काम दिनुहुन्छ, र फरक रगत-वंशमा उहाँहरूको देहहरू दिनुहुन्छ। यहोवाको आत्मा येशूका आत्माका पिता हुनुहुन्‍न, र येशूको आत्मा यहोवाका आत्माका पुत्र हुनुहुन्‍न: उहाँहरू एउटै र उही आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसरी नै, आजका देहधारी परमेश्‍वर र येशूमा रगतको सम्‍बन्ध छैन, तर उहाँहरू एउटै हुनुहुन्छ, यो यसैले हो कि उहाँहरूका आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। परमेश्‍वरले कृपा र दयाको, साथै मानिसको धार्मिक न्याय र सजायको, र मानिसमा श्राप हालिदिने काम गर्न सक्‍नुहुन्छ; र अन्तिममा, उहाँले संसारलाई नष्ट गर्ने र दुष्टलाई दण्ड दिने काम गर्न सक्‍नुहुन्छ। के उहाँले यो सबै आफै गर्नुहुन्‍न र? के यो परमेश्‍वरको सर्वशक्तिमान्‌ता होइन र? उहाँ मानिसको लागि व्यवस्था प्रकाश गर्न र उसको निम्ति आज्ञाहरू जारी गर्न सक्षम हुनुहुन्थ्यो, र सारा इस्राएलीहरूलाई आफ्‍नो प्रभुत्वको अधीनमा राख्दै, प्रारम्भिक इस्राएलीहरूलाई पृथ्वीमा तिनीहरूको जीवन जिउन अगुवाइ गर्न, र मन्दिर र वेदीहरू बनाउन तिनीहरूलाई अगुवाइ गर्न पनि सक्षम हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अख्तियारको कारणले गर्दा, उहाँ इस्राएलका मानिसहरूसँग दुई हजार वर्षसम्‍म पृथ्वीमा बस्‍नुभयो। इस्राएलीहरूले उहाँको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने आँट गरेनन्; सबैले यहोवाको श्रद्धा गरे र उहाँका आज्ञाहरूलाई पालन गरे। त्यस प्रकारको कार्य उहाँको अख्तियारको सद्गुण र उहाँको सर्वशक्तिमान्‌ताद्वारा गरिएको थियो। त्यसपछि, अनुग्रहको युगको अवधिमा, येशू सारा पतित मानवजातिलाई (इस्राएलीहरूलाई मात्रै होइन) छुटकारा दिन आउनुभयो। उहाँले मानिसलाई कृपा र दया देखाउनुभयो। अनुग्रहको युगमा मानिसले देखेका येशू दयाले भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो र मानिसप्रति उहाँ सँधै प्रेमिलो हुनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँ मानवजातिलाई पापबाट मुक्त गर्नको लागि आउनुभएको थियो। उहाँको क्रूसीकरणले मानवजातिलाई पापबाट पूर्ण रूपमा मुक्त नगरेसम्‍म उहाँ मानिसहरूका पाप क्षमा गर्न सक्षम हुनुहुन्थ्यो। यो अवधिमा, कृपा र दयासहित परमेश्‍वर मानिस सामु देखा पर्नुभयो; अर्थात्, उहाँ मानिसको लागि पापबलि बन्‍नुभयो र मानिसको पापहरूको निम्ति क्रूसमा मारिनुभयो, ताकि तिनीहरूलाई सदाको लागि क्षमा दिइन सकोस्। उहाँ कृपालु, करुणामय, धैर्य, र प्रेमिलो हुनुहुन्थ्यो। अनि अनुग्रहको युगमा येशूलाई पछ्याउनेहरू सबैले सबै कुरामा धैर्य र प्रेमिलो बन्‍ने प्रयास गरे। तिनीहरू सहनशील थिए, र कुटपिट गर्दा, सराप्दा, वा ढुङ्गाले हान्दा पनि तिनीहरू कहिल्यै आफ्‍नो प्रतिरक्षा गर्न लडेनन्। तर अन्तिम चरणको अवधिमा त्यस उप्रान्त यस्तो हुन सक्दैन। उहाँहरू एउटै आत्माका हुनुहुन्थ्यो तैपनि येशू र यहोवाको काम पूर्ण रूपमा एउटै थिएन। यहोवाको कामले युगलाई अन्त्य गरेन, तर पृथ्वीमा मानवजातिको जीवनलाई प्रारम्‍भ गर्दै नयाँ युगको अगुवाइ गर्‍यो, र आजको काम भनेको गम्‍भीर रूपमा भ्रष्ट बनेका अन्यजाति राष्ट्रका मानिसहरूलाई जित्‍न, र चीनमा भएका परमेश्‍वरका चुनिएका मानिसहरूलाई मात्रै होइन, तर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड र सारा मानवजातिलाई अगुवाइ गर्नको लागि हो। यो काम चीनमा मात्रै गरिन्छ भन्‍ने तँलाई लाग्‍न सक्छ, तर वास्तवमा यो अरू देशमा पनि फैलन थालिसकेको छ। किन चीन बाहिरका मानिसहरूले बारम्‍बार साँचो मार्गको खोजी गर्छन्? यसको कारण के हो भने आत्माले नै काम सुरु गरिसक्‍नुभएको छ, र आज बोलिएका वचनहरू ब्रह्माण्डभरिका मानिसहरूप्रति लक्षित छन्। यससँगै, कामको आधा भाग पहिले नै भइरहेको छ। संसारको सृष्टिदेखि वर्तमानसम्‍म, परमेश्‍वरका आत्माले यो महान् कार्यलाई अघि बढाउनुभएको छ, र उहाँले फरक युगहरूमा र फरक राष्ट्रहरूका बीचमा फरक-फरक काम गर्नुभएको छ। हरेक युगका मानिसहरूले उहाँका फरक स्वभावलाई देख्छन्, जसलाई उहाँले गर्नुहुने फरक कामद्वारा स्वभाविक रूपमा नै प्रकट गरिन्छ। उहाँ कृपा र दयाले भरिएका परमेश्‍वर हुनुहुन्छ; उहाँ मानिसको निम्ति पापबलि र मानिसका गोठालो हुनुहुन्छ; तर उहाँ मानिसको न्याय, सजाय, र श्राप पनि हुनुहुन्छ। उहाँ मानिसलाई पृथ्वीमा जिउन दुई हजार वर्षसम्‍म अगुवाइ गर्न सक्‍नुभयो, र उहाँले भ्रष्ट मानवजातिलाई पापबाट मुक्त गर्न पनि सक्‍नुभयो। आज, जसले उहाँलाई चिन्दैनन्, उहाँ ती मानवजातिलाई जित्न, र उहाँको प्रभुत्वमुनि घुँडा टेकाउन पनि सक्‍नुहुन्छ, ताकि सबै उहाँमा पूर्ण रूपमा समर्पित हुन सकून्। अन्तिममा, उहाँ कृपालु र प्रेमिलो परमेश्‍वर मात्रै हुनुहुन्‍न, बुद्धि र आश्‍चर्यका परमेश्‍वर मात्रै हुनुहुन्‍न, पवित्र परमेश्‍वर मात्रै हुनुहुन्‍न, तर, अझै बढी, मानिसलाई न्याय गर्ने परमेश्‍वर पनि हुनुहुन्छ भन्‍ने कुरालाई देखाउन उहाँले ब्रह्माण्डभरिका मानिसहरूभित्र रहेका अशुद्ध र अधर्मी कुराहरूलाई जलाएर हटाउनुहुन्छ। मानजातिका बीचमा रहेका दुष्टहरूका लागि उहाँ ज्वाला, न्याय, र दण्ड हुनुहुन्छ; सिद्ध हुनुपर्नेहरूका लागि, उहाँ संकष्ट, शोधन, र परीक्षाहरू, साथै सान्त्वना, भरण-पोषण, वचनको प्रावधान, निराकरण, र काट-छाँट हुनुहुन्छ। अनि हटाइएकाहरूका लागि, उहाँ दण्ड र बदला हुनुहुन्छ। …
वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “दुई देहधारणहरूले देहधारणको महत्त्व पूरा गर्छन्” बाट उद्धृत गरिएको
अघिल्लो: परमेश्‍वरका नामहरू परिवर्तन हुन सक्छन् तर उहाँको सार कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन